Global Voices teny Malagasy » Mitsabo Ny Fifandraisan’i Japana Sy Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Novambra 2012 22:14 GMT 1	 · Mpanoratra Mari Wakimoto Nandika (en) i Keiko Tanaka, avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Shina, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Haisoratra, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona
Yokodo-Syujin, bilaogera, dia mijery ireo ezaka marobe notarihan'ny mpanoratra avy amin'ny firenena roa tonta, izay manantena ny hitsabo ilay fifandraisana. Ao amin'ny lahatsorany  [ja] tamin'ny 12 Oktobra izy dia miteny an'i Mo Yan ilay nahazo ny Loka Nobel :
民主派の中国人は莫言氏に批判的 ですが、共産体制下 ですから致し方ないでしょう。2年前の2010年にノーベル平和賞を受賞した劉暁波 氏に対しては、当局は弾圧 を加えて言論活動を封じています。こうなったら何もできませんから、体制批判をしようとしたら相当な工夫が必要となります。
Ilay Shinoa mpanoratra, Mo Yan, no nahazo ny Loka Nobel momba ny Literatiora. Ilay Japoney mpanoratra, Haruki Murakami , no nosaintsainina ho toy ny handresy tamin'izany, nefa dia azo lazaina fa ny loka ho an'ny literatiora dia “fifanandrinan'i Japana sy Shina”, ny vokatra dia nanome fandresena ho an'i Shina. Faly ny vahoaka Shinoa, saingy indro fifantenana ny fivoaran-draharaha mahaliana.
Ireo Liberaly ao Shina dia lazaina fa mpanakiana an'Atoa Mo Yan , saingy tsy azo ihodivirana izany eo ambany rafitra Antoko Kaomionista . Namoritra an'Atoa Liu Xiaobo  sy ny hetsiny amin'ny kabariny ireo manampahefana, nahazo ny Loka Nobel momba ny Fandriampahalena roa taona lasa izao  i Mr.Liu tamin'ny 2010. Noho izany, fantatsika tsara fa tsy misy toerana ho an'ny fanakianana rafitra izany raha tsy hoe angaha ianao tonga miaraka aminà fomba fanao tena mbola vaovao tsy nisy nahita mihitsy.
Tsapako ao anatin'ny nisafidianana an'i Mo Yan hahazo ny Loka Nobel amin'ny Literatiora, fa nararaotin'ny Kaomity mpifantina ny Nobel ity fotoana ity hitsaboana ny fifandraisana eo amin'i Japana sy Shina. Atoa Mo Yan dia malaza ho mpitia an'i Japana. Raha Atoa Murakami kosa no nahazo ny loka, mety ho niharatsy ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta, indrindra indrindra taorian'ny nahazoan'i Shinya Yamanaka  ny loka Nobel. Ny Loka Nobel dia tohanan'ny antony iray ara-politika hatrany.
Miresaka an'i Professora Cui Weiping  ihany koa izy, izay nanao antso tamin'ny aterineto mba hanatsaràna ny fifandraisana, izay voatanisa ihany koa tanaty lahatsoratra iray  tao amin'ny gazety Japoney Asahi Shimbun [ja].
Araka ilay lahatsorara dia hetsika sivily tao Japana no nanosika an'Atoa Mo Yan hanao antso ho fanangonan-tsonia  [zh] mba hahamatotra ilay fomba fijery momba ireo fifandraisana.
Vondron'olon-tsotra no nikarakara ilay hetsika teo ambanin'ny teny faneva hoe “Atsaharo ny Ady Tany Tsy Misy Farany .” Araka ny ambaran'ilay vondrona  [ja] dia olona 1600 ka isan'izany ilay mpanoratra nahazo ny Loka Nobel momba ny Literatiora tamin'ny 1994, Kenzaburo Oe , no naneho ny fanohanany.
Etsy ankilany ny MSN Sankei News  nitatitra fa hoe ny teny faneva dia hoe [ja] “fankahalàna an'i Japana”  ary marobe no nanakiana  [ja] an'Atoa Oe sy ilay vondrona sivily.
Raha nitatra ireo hetsi-panoherana mankahala an'i Japana, ilay bilaogera Yokodo-shujin  [ja] kosa nanoratra tsy tapaka nandritra ny volana iray mikasika ny ahiahiny amin'ny fiharatsian'ny fifandraisan'i Japana sy Shina.
Ny 17 Septambra, nanoratra lahatsoratra iray izy, mitondra lohateny hoe “ny votoatin'ny korontana anatin'ny hetsi-panoherana iray fankahalaàna an'i Japana dia resaka ady fitondràna ” [ja]. Ny 18 Septambra izy dia nanoratra hoe, “ny ankamaroan'ny Shinoa no mahita dian-tànan'i Etazonia avy ao ambadik'io ” [ja] ary manao sosokevitra ny amin'ny hoe iza no hahita tombontsoa amin'ilay fifandirana. Ary ny andro manaraka, nanoratra izy hoe “lalaovina sy zimbazimbaina ny vahoakan'ny firenena roa tonta ” [ja] mitandrema amin'ny fiakaran'ny maripàna. Mitohy hatrany manoratra izay tonga ao an-tsainy ao anatin'ny bilaoginy izy.
Ireo olona nanao sonia ilay fanangonan-tsonia tamin'ny tena anarany dia tena feno fahasahiana tokoa . Ireo olona toa an'i Cui Weiping no tena maneho tsara ny fo mitepo ao Shina. Isika Japoney tokony hiasa miaraka amin'ireo olona ireo mba hiroborobo miaraka.
Ity lahatsoratra ity dia manasongadina ny bilaogy Yokodo-shujin  rehefa nahazo alàlana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/11/09/40294/
 ho fananam-pireneny : http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%96%E9%96%A3%E8%AB%B8%E5%B3%B6%E5%9B%BD%E6%9C%89%E5%8C%96
 lahatsoratray teo aloha : https://jp.globalvoicesonline.org/2012/10/25/17367/
 Mo Yan ilay nahazo ny Loka Nobel: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2012/
 rafitra Antoko Kaomionista: http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_the_People%27s_Republic_of_China
 nahazo ny Loka Nobel momba ny Fandriampahalena roa taona lasa izao: https://globalvoicesonline.org/2010/10/13/china-more-reactions-to-a-first-nobel-prize/
 lahatsoratra iray: http://www.asahi.com/world/china/news/TKY201210080356.html
 Atsaharo ny Ady Tany Tsy Misy Farany: http://peace3appeal.jimdo.com/english/
 Araka ny ambaran'ilay vondrona: http://peace3appeal.jimdo.com/%E8%A1%8C%E5%8B%95%E6%A1%88%E5%86%85/
 MSN Sankei News: http://en.wikipedia.org/wiki/Sankei_Shimbun
 nitatitra fa hoe ny teny faneva dia hoe [ja] “fankahalàna an'i Japana”: http://sankei.jp.msn.com/world/news/120929/kor12092922120005-n1.htm
 marobe no nanakiana: http://ceron.jp/url/sankei.jp.msn.com/world/news/120929/kor12092922120005-n1.htm
 ny votoatin'ny korontana anatin'ny hetsi-panoherana iray fankahalaàna an'i Japana dia resaka ady fitondràna: http://yokodo999.blog104.fc2.com/blog-entry-754.html
 ny ankamaroan'ny Shinoa no mahita dian-tànan'i Etazonia avy ao ambadik'io: http://yokodo999.blog104.fc2.com/blog-entry-755.html
 lalaovina sy zimbazimbaina ny vahoakan'ny firenena roa tonta: http://yokodo999.blog104.fc2.com/blog-entry-756.html
 feno fahasahiana tokoa: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_China